राजेन्द्रले ल्याए- गाउँदा र नाच्दा जमिनै थर्किने बबाल तीज गीत, कस्तो छ ? (हेर्नोस् भिडियो सहित) - HAMRO YATRA
राजेन्द्रले ल्याए- गाउँदा र नाच्दा जमिनै थर्किने बबाल तीज गीत, कस्तो छ ? (हेर्नोस् भिडियो सहित)
काठमाडौं, साउन । हिन्दू नेपाली महिलाहरुको विशेष चाड हरितालिका तीजलाई लक्षित गरी विभिन्न गायक गायिकाहरुले तीज विशेष गीत बजारमा ल्याएर चर्चा बटुलिरहेका छन् ।
फरक फरक शैली र भाकाका गीतहरुले साउन महिना तीजमय भएको छ । रेडियो तथा टेलिभिजनमा प्रायः तीजका गीत बज्ने गरेका छन् । अझ पछिल्लो समय युट्युवको ट्रेण्ड बढेसँगै गायक गायिकाहरुहले आफ्नो गीत तयारी हुनासाथ अपलोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने गरेका छन् ।
कोही विभिन्न फण्डा अपनाएर गीत चर्चित बनाउन खोज्छन् त कोही आफ्नै लय, भाषा र माधुर्य श्वरका कारण चर्चित बन्छन् । यही मेसोमा एउटा उदाउँदा गायक राजेन्द्र बिस्टले पनि आफ्नो तीज कोशेली ‘मैले नाच्दा त जमिनै थर्किने’ बाेलकाे गीत बजारमा ल्याएका छन् ।
गीत सुन्दा दर्शक तथा श्रोताले वेग्लै अनुभूति गर्ने खालको यस गीतमा लय तथा शब्द पनि स्वयं गायक विष्टको नै रहेको छ । गायक विष्टलाई कल्पना बिसीले साथ दिएकी छिन् । अनिश लामाद्धारा निर्देशित गीतमा प्रबिन रेश्मी मगरको सम्पादन, बिक्रम कार्कीको छायांकन रहेको छ । सो गीतमा दिपेन्द्र मल्ल र रेखा खत्रीले अभिनय गरेका छन् ।
गायक राजेन्द्र बिष्टको गीत कस्तो छ हेर्नुहोस् भिडियो सहित